Gacalisada cusub ee Cristiano Ronaldo oo shaqada laga soo ceyriyay…(Sabab yaab leh oo ka dambeysa) – Gool FM
Gacalisada cusub ee Cristiano Ronaldo oo shaqada laga soo ceyriyay…(Sabab yaab leh oo ka dambeysa)
(Madrid) 06 Dis 2016. Georgina Rodriguez oo ah gabarta cusub uu haasaawaha kala dhexeeyo Cristiano Ronaldo ayaa saaxiibkeeda cusub dartii shaqadeyda ku waysay.
Dhaliyaha Real Madrid ayaa ku howlan iminka sidii uu shaqo cusub ugu heli lahaa gacalisadiisa cusub ee Georgina.
Xiriirka labada lamaane ayaa si aad ah u sii xoogsaday kaddib markii ay jariiradda El Espanol ee ka soo baxda Spain ay warisay in Ronaldo uu soo galay arrintan si uu shaqo ugu helo lamaantiisa cusub.
Georgina Rodriguez ee ka shaqeynasay shirkadda fashion ka ee Gucci ayaa la aaminsan yahay in shaqada looga soo ceyriyay sababo la xiriira saxaafada iyo sawir qaadayaasha soo hor dhoobta goobta shaqada si ay ula kulmaan gacalisada cusub ee Ronaldo.
Cristiano Ronaldo ayaase la warinayaa inuu durba u istaagay sidii uu magaciisa iyo heshiisyadiisa uu shaqo cusub ugu heli lahaa Georgina.
Heshiis kordhintii Pepe oo hakad uu soo wajahay (Maxaa dhacay?)
Brazil iyo Colombia oo ciyaaraya kulan saaxiibtinimo oo u jeedo gaar ah laga leeyahay